Mudaharaadkii ka dhacay Göteborg | Somaliska
Maalintii axadii ayaa magaalada Göteborg waxaa ka dhacay mudaharaad ay isugu soo bexeen dad gaaraya ilaa 100 qof oo ka kooban Soomaali iyo dadka kale ee daneeya arimaha mideynta reeraha. Dibadbaxayaasha ayaa socodkooda ka soo bilaabay goobta loo yaqaan Götaplatsen iyaga oo socod ku tagay halka lagu magacaabo Gustav Adolfs Torg.
Qaar ka mid ah dadkii ka soo qeyb galay mudaharaadka oo la hadlay saxaafada ayaa u sheegay dhibaatada ka haysata kala maqnaashaha iyaga iyo reerahooda. Waxaa sidoo kale warbaahinta la hadashay Frida Jonsson oo gudoomiye u ah ururka FARR oo u dooda arimaha soo galootiga.
“Waa ku mahadnaqeynaa balan qaadka mideynta balse ilaa hada waxyar ayaan ka ognahay sida sharciga uu noqonaya iyo sida ay deeqsi u noqonayaan” ayay tiri Frida.
Gabagabadii mudaharaadka ayaa waxaa dadka la hadlay imaamka masaajidka Göteborg Abdul Rashid Mohamed.
Mudaharaadka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay dalada lagu magacaabo Nätverket för rätten till familjeåterförening oo ay ku mideysan yihiin ururo badan oo isugu jira kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa Swedish ah kuwaasoo u dooda mideynta reeraha kala maqan.
Abuu cali says:
Asc ugaas jimcalle waxaan ku weydiiyay warbixinti daraad aad soo qortay oo eheed wasiirka socdalka iyo duqa falköping maxaa kasoo baxay mase kulanki waa oow baaqday jawaab ayaan kaa sugeynaa ugaas waana ku mahadsantahay dadaalka aan la,ilowin karin
November 21, 2011 at 23:03
Asc saxxibayaal E-mailkaayga meesha ma iiga saari kartaa, maxaa yeelay qofkii computerkayga galaba uu soo baxayaa. Waxaaadna leedahiin cidna ma arkayso dadkii oo dhanba way arkayaanbe ee. Jawaab deg-deg ah ayaan idinka doonayaa facebook kaygana waan idinka saarayaa saaxiib danbe idin lama sii ahaanayee.
November 21, 2011 at 23:12
Waxaan ula jeeda cida maamula webb Somaliska.com. Haddi kale DOMSTOL ayaan isla aadaynaa.
November 22, 2011 at 08:44
Abdi emailkaaga xagee ayuu saaranyahay? kombutarkaaga adiga ayaa iska leh oo ka saari kara. Akhristayaasha Somaliska ma arki karaan emailkaaga.
Hubsiimo halbaa la siistaa!!!
Abuu Cali wax goaan ah lagama fileyn kulankii wasiirka iyo gudoonka falköping balse waxaan filayaa in fariintii loo gudbiyay wasiirka.
Haa, wey fiicnaan lahayd inaan kasaari karo waana isku dayay inaan kasaasaro, laakin masoconeyso. Kumbuutarkana dad badan ayaana ila isticmaalo Kumputarka. E-mailkayga kuma wada jiro Kumputarka dhan ee waxuu soo baxayaa markii qeybta wararka somaliska la akhrisanayo hoosteeda.
Markii hore waxaan isla haa waa somaliska aad saaxiibka la tahay marka somaliskiina slut gilla ayaan taabtay illa hadda aniga ma garanayo waxa uu E-mailkayga ugujiro somaliska qeybta hoose rekommenderarka.
saaxiib jimcaale waxaan rabaa inaan arimo aniga i khuseeye kaala hadlo oo aad iga caawintid marka mayga so wici kartaa telefoonakan 0735703743 waa comviq waxaan rabaa inaad ixsaan ii samayso telkaa ioga so wacdo hadaadan isoo wici karin aad telkaaga maasej iigu soo dirto maadaamaa aynu nahay dad soomali ah muslim ah iscaawiya
Asalaamu caleykum, @Abdi, walaal emailkaaga waxaad sameysaa tir tir oo ku qor email kale sax amo qalad ha ahaado kii aad doonto kadibna comments ku soo dir mid ka mid qoraalada sidaas buu kaagii ugu baxayaa oo waxa uu qabsanayaa kan ugu danbeeyo marwalba haddii emailkaaga ugu danbeeyo waxaaa dhaceyso in uu haysto haddii mid kale ugu danbeeyana waxaa ka dhaceyso in kaagii tir tirmo uu mid kaa kale haysto. @Jimcaale mahadsanid bro howsha aad bulshada Soomaaliyeed u hayso.
asc anga magacayga axaa la idhaahdaa abdishakuur haddiii arrinta yarta ah fikir aan ka dhiiibto waxaa oodhani lahaa somali haddii aan nahay gaalka inooma haysto dad dhibaaato haysto wuxuu inoo arkaa dad gaajo ka soo cararay asc
Asc wr dhamaan walaalahay muslimiinta ah ee Somaliyed gaar ahaan kuwa bahda Somaliska, salaan ka dib waxaan rabaa inaan su’aal weydiiyo walalkey Jimcale aad ayaan uga mahad celinaayaa howsha uu u haayo dadkiisa Somaliyeed, kheyr iyo ajir Allaha kaa siiyo, teeda kale waxaan kaa codsanlahaa inaan isiiso adress aan kala xiriiri karo hadii aad hayso hay’adan Nätverket för rätten till familjeåterförening si aan ula xiriiro. shurkan
ASC waxaa mahadleh allaah marka sida qeerka ku jiro alle ayaa og eelle aan talada saarano waxaa laga yaabaa in ay qeer noo aheeyn keenista caruurta ee somaaliyeey ilaah aan isku xerno alle talo ku filan
ali adisababa says:
waxaan jeclaan lahaa in ay san safaaradaan aysan wax joojin karin ayna waxaybilaawdo maxaayeelay swdan ayaa laka xukumaa marka awood malaha safaarada ethiopia ha iswareerina adis ababa wax lakumahayo rajada waa socdaalka ……….. ali adis ababa
Wlhi somali dhib ayaa heysta meelkasta ooy joogaan aan u duceyno somalia in ilahay dhibka naga saaro. waalidiinta qoyskooda ka maqanyahayna in ilaahay gaaladaan uga fujiyo oo ay la midoobaan aamiin dhaha. Waxaan u mahad celinaa ilaahay kabacdi waxaan u mahad celinaa waalkeen jimcaale oo howl culus haaya iyo inta la shaqeysa.